Horudhac: Empoli Vs Juventus Ee Horyaalka Serie A Italy, Wararka Labada Koox Iyo Shaxda Macquulka
HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Empoli Vs Juventus ee Horyaalka Serie A Italy, Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
February 26, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Ka dib seddex barbaro oo xiriir ah, Juventus waxay u safreysaa Empoli iyagoo raadinaya seddexda dhibcood si ay u gaaraan hamigooda afarta sare ah ee horyaalka..
Kooxda ka dhisan Tuscan ayaa garaacday Juventus bishii Ogosto kooxda heysata horyaalka Seria B – Bianconeri ayaa hadda la kulmi doonta koox adag.
tababaraha Juventus Max Allegri ayaa dhaawac cagta ah ku waayay Weston McKennie qeybtii labaad ee barbaraha Talaadadii ee Villarreal, ciyaaryahanka khadka dhexe ee Mareykanka ayaa tan iyo markaas laga saaray garoomada muddo labo bilood ah.
Mustaqbalka reer Brazil ee Kaio Jorge ayaa sidoo kale soo gaaray dhaawac halis ah usbuuca dhexdiisa, isagoo gudanaya waajibaadkiisa 23-jirrada kooxda, waxaana hadda lagu sameeyay qalliin looga sameeyay xuubka isagoo si degdeg ah u soo afjaray xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Serie A.
daafaca dambeedka midig Danilo ayaa ka soo laabtay ganaax maxalli ah, waana inuu ku soo bilowdo, halka Federico Bernardeschi uu ku dhow yahay inuu taam u noqdo.
Dhibanaha kale ee dhaawaca muddo dheer ah Federico Chiesa iyo saaxiibkiis Giorgio Chiellini ayaa weli dhaawac ku maqan, inkastoo labada kale ee Daniele Rugani iyo Paulo Dybala ay tahay in la qiimeeyo ka hor ciyaarta.
Dhanka kale, Empoli Ciyaaryahanka amaahda ku jooga ee Valerio Verre ayaa shaki laga gelinayaa kooxda martida loo yahay, halka Nicolas Haas uu dhaawac ku maqanyahay, laakiin Aurelio Andreazzoli ayaa haysta inta badan raggiisa ugu muhiimsan.
Haddii uu taam u noqdo, Verre waxa uu la tartami doonaa Liam Henderson iyo Nedim Bajrami si ay u taageeraan gooldhaliyaha sare ee Andrea Pinamonti afka hore, in kasta oo Patrick Cutrone uu sidoo kale yahay dookh haddii Azzurri ay doorato labada hore.
Saacada (20:05 pm Somalia) (18:05 pm Yurub)
Garoonka Carlo Castellani Stadium